Ampidiro ao amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny suite Aircrack
vaky rivotra dia efitrano fitsapana fiarovana tamba-jotra tsy misy tariby izay manana andiana fitaovana iaraha-miasa izay ahafahanay manombatombana ny fiarovana ny tambajotra Wifi, ampiasainay eo ambanin'ny tsipika fibaikoana io suite io.
vaky rivotra mamela antsika hanao fanaraha-maso noho ny hamaroan'ny fitaovana ampiasainy. Tokony holazaiko fa ao anatin'ny chipset izay miasa tsara amin'ny aircrack dia ny Ralink. Ka raha te hanao fitsapana pentest miaraka amin'ny fanampian'ity suite ity ianao Tokony ho azonao antoka fa manohana ny maody fanaraha-maso ny karatra Wifi anao.
Azo antoka fa manontany tena ianao hoe inona ny maody fanaraha-maso? Eny, ampandehananay ny maody fanaraha-maso mba hidiran'ny karatra Wifi anao amin'ny lahasa tokana, mazàna izany dia tokony hatao amin'ny fomba (mihaino sy miteny) miaraka amina mpizara (mandefa sy mandray fonosana), fa ohatrinona no ampodinao ny maody fanaraha-maso ity ihany dia natokana hihainoana (fandraisana fonosana).
ao anatin'ny ireo fitaovana hitantsika ao anatin'ny suite Aircrack dia:
Miaraka amin'izy ireo isika dia afaka manao hetsika isan-karazany toy ny fanaraha-maso ireo fonosana azony, manana fiasa hafa toy ny fanafihana ahafahantsika manamarina ireo mpanjifa mifandray, mamorona teboka fidirana sandoka ary ny hafa amin'ny alàlan'ny tsindrona fonosana.
Ny Aircrack dia miasa indrindra amin'ny Linux, fa koa Windows, OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, ary eComStation 2 aza.
Ahoana ny fametrahana Aircrack amin'ny Ubuntu?
Azontsika atao ny mametraka ny suite Aircrack amin'ny rafitray avy amin'ny repositories ofisialy Ubuntu, ity fomba ity dia manan-kery ihany koa ho an'ny derivatives.
Ho an'ity tsy maintsy manokatra terminal izahay ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha vantany vao vita ny fizotrany, dia mijanona fotsiny fa manomboka amin'ny fitsapana anao amin'ilay fitaovana ianao, azoko atao ny manoro anao ity rohy manaraka ity izay ahafahanao mahafantatra ny sasany amin'ireo karatra tsy misy tariby mifanentana amin'ity fitaovana ity izay ahafahanao mahita avy amin'ny faran'izay sarotra indrindra ka hatramin'ny sasany izay mety indrindra amin'ny fitsapana ao an-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny suite Aircrack
Fitaovana tena tsara !!!
Ny fahatokiana dia havaozina amin'ny kinova 2.2.2